Ndi Achọkorita Achọputa Ochicho Nyocha Omume?
Ihe mbụ ị ga-eme mgbe ị na-ebido mkpọsa SEO gị bụ ilekwasị anya na ịmepụta ọdịnaya bara uru, ogologo oge.Tupu ị na-ebipụta isiokwu gị, posts blog, akwụkwọ ọcha ma ọ bụ nchọpụta ihe ọmụmụ jide n'aka na ha gafere akara akara 500. Cheta na, site n'inwe isiokwu dị ogologo, ọ na-adịrị gị mfe karị iso ndị na-agụ akwụkwọ na-enye ha ezigbo uru na ahụmahụ na-akwụghachi ụgwọ. Inye atụmanya gị na ihe ọmụma, ihe na-akpali akpali ma dị mkpa nke ha nwere ike irite uru bụ ụzọ kachasị mma isi mee ka okporo ụzọ gị dịkwuo mma ma dọta ndị na-agụ akwụkwọ ọhụrụ. Ya mere, ọ bụrụ na ịchọrọ ka saịtị gị kwadoro na Google, ị ga-emepekwu ọdịnaya dị omimi nke na-agwa ndị ọrụ chọrọ na mkpa ha.
Buru n'uche, ndị na-ege gị ntị ga-ehichapụ ma ọ bụrụ na isiokwu gị anaghị emetụta ha kpọmkwem. Ọnụ ọgụgụ na-egosi na ihe kariri pasent 70 nke ndị na-agụ akwụkwọ nwere nkụda mmụọ mgbe weebụsaịtị nyere ọdịnaya, mgbasa ozi, onyinye, nkwalite ndị na-adịghị mkpa nye ha. N'ụzọ dị iche, ọdịnaya nke na-aza ajụjụ ndị na-agụ akwụkwọ mgbe niile na-enye ohere ka mma ịgụ. Site n'inweta ọdịnaya dị otú ahụ, ị ​​na-egosi ndị na-agụ akwụkwọ gị na ị nwetara ihe dị mkpa ikwu na ịkekọrịta na ha. N'ụzọ dị otú ahụ, ị ​​na-enweta ndị na-agụ akwụkwọ 'ịtụkwasị obi ma na-akpali ha ịghọ ndị ahịa gị.
Cheta, ị nwere ike ịchọpụta mgbe niile ka mma ọdịnaya gị dị na saịtị site na iji SEZ Nyocha Ịntanetị SEO. Ọrụ SEO a bara uru bụ nhọrọ zuru oke maka ndị na-agbalị ịlele njirimara ọdịnaya nke ụlọ ọrụ ha site na iji ọrụ, nnweta na nyocha ihuenyo ọchụchọ.
Kwalite Ulo Weebụ Otu
Ọ dịghị ihe ọ bụla gọrọ na ihe ndị ọzọ dịka njikọ na mgbasa ozi ọha na eze na-ewere ihe ngosi mgbe ndị mmadụ na-ekwurịta banyere SEO. Ọ bụ ezie na iwepụ SEO bụ akụkụ dị mkpa nke mmepe weebụ, otu enweghị ike ileghara mkpa ọ dị njikarịcha na ibe.
Ogologo mkpirikpi mkpirikpi, on-page SEO bu uzo zuru oke nke ichota ibe ibe ibe ha (koodu HTML ha na ihe di n'ime ha) iji bulie elu ma nweta ahia ndi ozo n'inweta engines. Ọ bụrụ na nke ahụ dị oke egwu na mgbagwoju anya nye gị, atụla egwu. Seo SEO abughi uzo di iche iche nke nuklia, SEO novices nwere ike iji ihe ntuziaka di n'okpuru a kpuchie isi ha:
aha mkpado: mkpado aha nke ibe weebụ bu ihe doro anya. nkọwa nkenke nke ọdịnaya nke akwụkwọ dị ugbu a. Maka nsonaazụ kacha mma, tinye isiokwu dị na isiokwu gị ma debe ya karịa 70 akara ngosi.
Nkọwapụta: Nkọwapụta akọwapụtara ihe. A pụrụ ịkọwapụta nkọwa dị oke mkpa na ịnweta akara ọrụ-site n'aka SERPs. Debe ya ruo odide 160 ma ọ bụ ole na ole.
kachasị URL: Mkpokọta weebụ gị ga-adị mkpụmkpụ ma dị mkpa. Jide n'aka na ha dị mfe maka ndị mmadụ ịgụ. Ịtinye isiokwu gị bụ isi na URLs bụ echiche magburu onwe ya ebe ọ bụ na omume dị otú ahụ na-enyere ndị na-agụ aka ịghọta ihe dị na peeji ahụ tupu ha pịa.
Okwu Frequency: Google na-ele anya ugboro ole akara okwu na-egosi na ibe weebụ. N'iji isiokwu nke bu ihe di iche iche n'ime oge nke ozi gi bu ihe nghota kacha mma. Ngwá Ọrụ Nchọpụta Density Analysis bụ ọrụ SEO n'efu ị nwere ike iji mee ka ị kesaa nkesa nke isiokwu ahụ n'ime ihe mpempe akwụkwọ a họọrọ.
Tụlee Njikọ Njikọ
Njikọ dị n'ime bụ ụzọ SEO dị mkpa nke a na-ekwesịghị ịdị na-elelị. N'okwu dị mfe, njikọ dị n'ime ya bụ njikọ ndị ahụ na-ezo aka na ibe ndị ọzọ n'otu aka ahụ. Njikọ dị n'ime ya bụ njikọ nke si n'otu ibe na ngalaba na-aga na ibe dị iche na otu ngalaba ahụ. Nwere olileanya na ị nwetara ya.
A na-eji njikọ ndị a na isi igodo. Ọzọkwa, ha bara uru nke ukwuu maka ndị na-ahụ maka ebe nrụọrụ weebụ ndị na-agbalịsi ike ịmepụta ihe ọmụma maka saịtị ahụ. Ihe bụ ihe ọzọ, esịtidem njikọ aka mgbasa njikọ ọṅụṅụ gburugburu weebụsaịtị, nke bara uru maka gị rankings. Site na njikọta nke ụlọ, ị nwere ike ịdọrọ uche nke abụọ: ndị na-enyocha engines na ndị ọrụ na otu ibe na ebe nrụọrụ weebụ gị, ihe na-eweta ọtụtụ uru maka SEO.
Na-anabata Nzube Weebụ maka Nrụ ọrụ Ọrụ
Dị ka nchọpụta ndị na-adịbeghị anya, ụbọchị ndị a, ihe karịrị pasent 70 nke ndị ọrụ Google choro ịchọgharị ekwentị na ịchọpụta desktọọpụ. N'ihi na ọtụtụ oge a na-achọ nyocha na ngwaọrụ mkpanaka, na nzaghachi ndị ọrụ bụ ihe dị mkpa dị na Google algorithm, ọ bụ oge dị elu na-eche echiche banyere ahụmịhe na ọrụ afọ ojuju.
Na-eche ihe mmemme weebụ a na-anabata? Ọfọn, mmemme weebụ na-emeghachi omume bụ maka ịzaghachi omume na gburugburu ebe obibi. Ka onye ọrụ ahụ si na laptọọpụ smartphone ha, saịtị ahụ ga-agbanwe na-akpaghị aka iji nweta mkpebi, nha ihu, na ịmepụta ikike.
Tụlee iji CSS ụdị akwụkwọ, ihe a na-agbanwe agbanwe, na ihe ntanetị nke dabeere na ya iji dozie ọdịnaya na nhazi nke ụlọ ọrụ dabere na ngwaọrụ. Cheta, ebumnuche gị kachasị mma bụ nchọpụta dị nro na ngụgụ ihe maka ndị ọrụ na-arụ ọrụ ntanetị na desktọọpụ.
Wụlite gị Websaịtị
Ọ dịghị onye nwere mmasị ichere. Abụọ: ngwa engines na ndị ọrụ na-ahụ maka ebe nrụọrụ weebụ na-ebu ngwa ngwa. E gosipụtawo na mgbe saịtị na-azaghachi nwayọọ nwayọọ, ndị ọrụ ga-ahapụ ya na ihe dịka 10 sekọnd.
Ya mere, oge ọzọ ị ga - arụ ọrụ nyocha zuru ezu, chọọ ohere iji mee ka ebe nrụọrụ weebụ gị dị ngwa. Ọ bụrụ na ị na-eji ọtụtụ ihe oyiyi na isiokwu gị na ibe weebụ, mpịachi ha. Na ihe omume ị na-eji usoro okwu dị ka WordPress, tufuo tinye-ons ma kpochapụ plugins na-enweghị isi. Nke a bụ nke kachasị nta nke ihe ị nwere ike ime iji mee ka saịtị anyị dị ngwa.
Ọ bụ ezie na SEO dị irè adịghị ọnụ ala, ọ pụtaghị na ị ga-ahapụ ịme onwe gị SEO. Kama ịchọọ maka ọrụ kachasị mma ọchụchọ, ị ga-agbaso ụkpụrụ nduzi ndị a kpọtụrụ aha n'elu. Ha agaghị efu gị penny Source . Echela oge ọ bụla - bido mkpọsa SEO gị ugbu a!